Dia Tinder ny fomba azo antoka ny hihaona olona vaovao ho amin'ny fifandraisana matotra
Dia Tinder ny fomba azo antoka ny hihaona olona vaovao ho amin’ny fifandraisana matotra
Tsy fantatro raha izany no manitatra.
Fa maro ny olona toa samy manana ny faniriany, ary izy rehetra ireo dia mety ho hita ao amin’ny Tinder, eo amin’ny mazava ny fako. Marina fa ny Tinder afokasoka vitsivitsy, nefa izy ireo mbola t efa ratsy. Araka ny fiarahana amin’ny aterineto no resahina, dia toa tahaka ny vehivavy o sy ny whatnot ny tsy miraharaha rehetra ny manavaka ny safidy, efa misy dikany izany ny mombamomba sy ny (araka izay efa mandre amin’ny daty) daty be dia be ry zalahy fomba ivelany ny mason-tsivana ihany. Ka. Online mampiaraka dia tena nampidina ny hevitry ny vehivavy. Fa angamba tsy rariny, nefa izy ireo mitaraina loatra mikasika ny zavatra toa ny complacency. Ary ny vokany dia ny mifanitsy amin’ny Tinder sy amin’ny Lalao efa nanana ny vokatra MITOVY hatrany ny fifandraisana viability no resahina. Satria aho daty pahendrena, ary satria ny ankamaroan’ny vehivavy daty toy ny safidy vao anjara. Ankoatra izany, tsy mahazo be dia be ny daty an-tserasera, fa rehefa hanao, izy ireo dia miaraka amin’ny ankizivavy izay mendrika ny famaritana ny inona no mitady aho. Ratsy loatra dia sarotra loatra ho an’ny hafa maro ny olona mamaky na mameno ny endrika. Fa rehefa misy olona manao sy ny tombontsoany ary ny ahy tsy mampifanaraka ny toetrantsika, Tinder dia tena azo antoka, ary efa nisy ny sasany mahafinaritra ary nihaona tamin’ny sasany mangatsiatsiaka ny vehivavy miaraka aminy. Tinder dia nanomboka toy ny hook-up fampiharana. Dia toy ny fomba iray mba hitady firaisana mpiara-miasa. Izany nahazo be dia be ny saina rehefa ny lalao Olaimpika ny atleta no nampiasa azy io nandritra ny lalao ho an’ny lelam-pitana dehibe ao amin’ny tanàna Olaimpika izy ireo no mipetraka any, ary ny haino aman-jery hita avy. Tantara mikasika ny «lalao Olaimpika mpifaninana nampiasa ny rehetra ny fimailo» foana no malaza, ary misy tantara momba ny lalao Olaimpika ny atleta, ny teknolojia vaovao, ary ny firaisana ara-nofo dia lehibe hira. Ny pelaka dikan-tinder, grinder, dia mbola be dia be rehetra momba ny hookup, fa izaho no nahita ny sasany tena mampihomehy haino aman-jery sosialy avy amin’ny olona miezaka ny hampiasa izany ho an’ny fifandraisana. Nanomboka tamin’izay tinder efa azonay ny mpihaino midadasika kokoa, miaraka ny olona mitady ny lehibe kokoa ny fifandraisana, fa ny fahatsapana aho fa tsy dia goavana samy hafa ny toerana ny. Tinder dia kely indrindra ao amin’ny fomba mitovy fepetra. Ianao hahazo ny sary sy ny teny vitsy. Hafa mampiaraka apps sy asa aoka ianao haka bebe kokoa ny mason-tsivana ho an’ny mifanandrify.
Ny fivavahana, ny fanabeazana, sns
Raha rehetra tsy miraharaha ny amin’ny fifandraisana matotra no fomba mijery ny sary sy ny fehezan-teny vitsivitsy, mandeha ho azy io, nefa azo antoka? Tsia, tsy hiantso tinder ny fomba azo antoka ny mahita ny fifandraisana matotra. Mety hitranga izany, saingy ianao koa mahazo valiny hoe «aho tao an-tanàna nandritra ny roa andro, tao amin’ny efitra fandraisam-bahiny, ary izany tsy dia ny tena anarana. Ianao DTF na tsia?» Tsy azoko ny lelam-pitana ny karazana vavy. Iray ny namana akaiky dia teo amboniny, ary namporisika ahy izy hanao sonia ny.
Noho izany, ny nataoko
Nandeha tany amin’ny saina tsy miangatra. Tsy maintsy ho ahi-dratsy ny weirdos sy ireo mitady ny lelam-pitana. Izaho dia nihaona tamin’ny lehilahy amin’ny tsy misy. Izahay indray mipi-maso ny fifandraisana ary be dia be iraisana. Nitondra ahy herinandro hanaiky ny daty sy ny nahitako azy amin’ny olona. Fast forward volana, isika dia nanolo-tena ary izy ny ofisialy ny olon-tiany. Misaotra ny Tinder Andriamanitra ho azy isan’andro.: -) Aho fa mbola tsy nahita azy tao ny olona, ny fiainantsika dia mbola tsy niampita ny lalana. Ny zavatra niainako manokana amin’ny Tinder teo lehibe. Fahazoan-dalana azy, amin’ny fampahatsiahivana fa ny olona rehetra dia manana ny fikasana, rehefa mampiasa azy io. Maro ny hosoka mombamomba ny olona amin’ny fahazoana. Tsy fantatro ianao na dia miresaka ny ankizivavy na ny ankizilahy. Tsy afaka manome toky fa ianao no miresaka amin’ny olona dia izay eo amin’ny sary
← American free mampiaraka toerana, tsy mila fisoratana anarana, tsy misy fandoavam-bola ao amin'ny United States
Mahagaga ny zava-misy ara-tsiansa momba ny Nono HuffPost Alemaina →